Europe's Top Luxurious Trains | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပရဲ့ထိပ်တန်းဇိမ်ခံရထား
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 30/10/2020)
သင်အမှန်တကယ်ထိုအများ၏အတွင်းပိုင်းကိုမြင်ရဖို့ဘောလီးဝုဒ်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ရန်မလိုပါ ဟန်ကြီးပန်ကြီးလုပ်သော, ဇိမ်ခံရထား, သို့သော်သင်ကသူတို့ကိုပျော်မွေ့ဘက်သို့ပိုက်ဆံတစ်ကြီးမားကျယ်ပြ Chunk သတ်မှတ်ထားဖို့ရှိသည်ပါဘူး. သငျသညျခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်£3ရရှိပါသည် အကယ်., 000+ နှမြောဖို့, တစ်ဦးဦးတည်ရာကိုရှေးခယျြ, မင်းပစ္စည်းတွေကိုထုပ်ပိုးမယ်, နှင့်တစ်သက်တာ၏ဤအတွေ့အကြုံကိုစတင်ကြကုန်အံ့! ဇိမ်ခံ၏ဤရောစပ်အကြောင်းကိုအရာအားလုံးကို, သက်သာခြင်း, နှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးတွေအများကြီး ဥရောပ၌သာယာလှပရှုခင်းများကြည့်ခြင်း တစ်ဦးမမေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံစေမည်.
ဗင်းနစ် Simplon Orient Express ကို
နောက်ကျောများတွင်မီးရထားသာမန်ထက်လောကီသားတို့သည်အဖို့ခရီးသွားများအတွက်မိတ်ဆက်တဲ့ရထား 1982 နေဆဲများစွာသောဥရောပခရီးသွားနဲ့ဇိမ်ခံရထားပရိသတ်တွေအတော်များများတဦးတည်းရွေးချယ်မှုရဲ့တူညီတဲ့ရထားဖြစ်ပါသည်. ဒါကြောင့်, နှိုင်းယှဉ်ခြင်းထက်ကျော်လွန်ပြီးရထားဇိမ်ခံကားကိုခံစားချင်သူမည်သူမဆိုသည်, ဗင်းနစ် Simplon Orient Express ကိုထိုသို့ပြုမှလမ်းဖြစ်၏. အများဆုံး ကျော်ကြားခရီး ဒီဇိမ်ခံထွက်ပေါက်၏လန်ဒန်နှင့်ဗင်းနစ်များအကြားဖြစ်ပါသည်. သို့သျောလညျး, များစွာသောအစ္စတန်ဘူလ်နှင့်ဘာလင်မှထပ်မံသွားမဆီးတားနိုင်ပါတယ်, နှင့် ဘာလင်ကနောက်ဆုံးစတင်ရပ်တန့်ဖြစ်ခြင်း ရထားများအတွက်. သင်ဒီရထားစီးတဲ့အခါ, သင်သည်သင်၏အစားအစာနှင့် 5-ကြယ်ပွင့်ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းတစ်ခုတည်းနှင့် shared အစုံအလုပ်လုပ်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးစားဖိုမှူးအချို့ရှိ.
စားသောက်ဆိုင်ကားတစ်စီးနှင့် Lounge နှင့်အတူ, အဆိုပါဧည့်သည်တစ်ဦးကောင်းမွန်စွာကောငျးအလှနျဘားဧရိယာလည်းမရှိ ... khm, ခရီးသွားများအတွက်. သငျသညျဇိမ်ခံရထား၏crème de la crèmeထင်လိုက်တဲ့အခါ, သင့်ရဲ့စိတ်ကိုချက်ချင်းသွားဘယ်မှာဗင်းနစ် Simplon Orient Express ကိုဖြစ်ပါတယ်!
ဗင်းနစ်မှ လန်ဒန် လက်မှတ်ကိုသင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်£ 2,700 ကုန်ကျမည်. အဆိုပါစီးနင်းအချို့ကြာ 16 နာရီ.
Belmond တော်ဝင် Scotsman ဇိမ်ခံရထား
စစ်မှန်စွာတော်ဝင်အစဉ်အလာမှတက်အသက်ရှင်တစ်ဦးကရထား, Belmond တော်ဝင် Scotsman စစ်မှန်တဲ့လာမယ့်အိပ်မက်ဖြစ်ပါသည်. ထိပ်အကြားတွင်ဖြစ်ခြင်း3ဇိမ်ခံရထား, Belmond သငျသညျကိုခစျြပါလိမ့်မယ်လမ်းကြောင်းများအခြေတည်ထားပါတယ်. ဤရွေ့ကားများပါဝင်သည် Scotch Malt ဝီစကီ Trail, အနောက်တိုင်းရှုခင်းသာအံ့ဖွယ်, စကော့တလန်ရဲ့ဂန္ထဝင် Splendours, Dale ရအေိုငျမြား & ဥယျာဉ်, နှင့်အများကြီးပို. spa န်ဆောင်မှုများ Belmond ဝါကြွား, အဖြစ်ကောင်းစွာ!4ရက်ကြာအဘိဓါန် Highland Classicmost လူကြိုက်အများဆုံးခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်. ရထားကနေပြေး ဧပြီလ အောက်တိုဘာလမှ, ထိုသို့အများအပြားလုံးဝအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့သာယာလှပရှုခင်းများကိုဖုံး, Skye ၏ကျွန်းအပါအဝင်. ပြန်ထိုင်နှင့်ကြီးမားသောဖန်ပြတင်းပေါက်များကဖြေလျော့, အဆိုပါအချို့ကိုအပေါ် SIP အကောင်းဆုံးဝိုင် နှင့်စမ်းစကော့တလန်သောအလှတရားကျော်.
လက်မှတ်စျေးနှုန်းများကိုလူတစ်ဦးနှုန်း£ 2,350 မှာစတင်ပါ.
အဆိုပါရွှေလင်းယုန်ညု Express ကိုဇိမ်ခံရထား
သင်ရွှေလင်းယုန်ညု Express ကိုနဲ့အတူခရီးမယ်လို့တစ်လမ်းအတွက်ဥရောပတွေ့ကြုံခံစားဘယ်တော့မှ. ရထားအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဇိမ်ခံအစုံအပေါ် prides, Deluxe နဲ့အမွေအနှစ်ကို cabin. သူတို့ကအစအိမ်ရာ၏ဘီးပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးစားသောက်ဆိုင်နှင့်ဘား Lounge ဝါကြွားခြင်း. အများဆုံး၏ဝေးတဦးတည်းအားဖြင့် ဇိမ်ခံရထား သငျသညျအစဉျအမွဲရွှေလင်းယုန်ညု Express ကိုကမ်းလှမ်းမှုကိုစီးပါလိမ့်မယ်5သို့ 12 ရက်ပေါင်း '' ခရီး. ဒါဟာဖုံးလွှမ်း ဘူဒါပက်အပါအဝင်နေရာများအရေအတွက်, ပရာ့ဂ်, ဇူးရစ်, ဗီယင်နာ, ဗင်းနစ်, အစ္စတန်ဘူလ်, Innsbruck ရှိ, ဆိုဖီယာ, အများအပြားကပို. သည်အခြားနေရာများအများအပြားလည်းရှိပါတယ် (ခရီးစဉ်) ကနေရှေးခယျြဖို့. အားလုံးရွှေလင်းယုန်ညု Express ကိုခရီး Off-ရထားခရီးစဉ်များနှင့်အတွေ့အကြုံများပါဝင်သည်.
Superior Deluxe အတန်းများအတွက်£ 22.260 ထံမှဒီတစ်ခုစတင်များအတွက်လက်မှတ်များကို.
Salzburg Innsbruck ရှိမှရထား
Cologne Innsbruck ရှိမှရထား
ဥရောပမှတစ်ဦးကခရီးစဉ်ကိုဇိမ်ခံရထားနှင့်ပြီးသား၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်မှာရှိတဲ့မွေ့လျော်ပါဝင်သည်, ဒါပေမဲ့အဲဒီရထားမဆိုအတွက်ဥရောပခရီးစဉ်အရာအားလုံးဖြစ်ပါသည်. အတူထောက်ပြဖို့တောင်အမှတ်ကနေမဆိုမီးရထားစီးနင်းများအတွက်လက်မှတ်ဝယ်ရန် တစ်ဦးကရထား Save နှင့်ဥရောပခံစားစတင်ရန်.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုခရက်ဒစ်ပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီမှာလုပ်နိုင်: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/europe-luxurious-trains/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#စျေးကြီး #စည်းစိမ်ကြီသော #traveleurope luxurytrain ရထားခရီးသွား ရထားခရီးစဉ်